Dilraba နဲ့ Ren Jialun တို့ အတူတွဲဖက်ရိုက်ကူးနေတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်လမ်းတွဲသစ် | News Bar Myanmar
Dilraba နဲ့ Ren Jialun တို့ အတူတွဲဖက်ရိုက်ကူးနေတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်
February လတုန်းက နာမည်ကြီးမင်းသမီး Dilraba Dilmurat ဟာ တက်သစ်စနာမည်ကျော်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Ren Jialun နဲ့အတူ “The Blue Whisper” နာမည်ရှိ Demon-Master အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲကို ရိုက်ကူးတော့မဲ့အကြောင်း တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အစောပိုင်းလတွေတုန်းက ဒီဇာတ်လမ်းသစ်အတွက် သတင်းသဲ့သဲ့ထွက်နေခဲ့ပေမဲ့လည်း အတည်ပြုပေးခြင်းမရှိသေးတာကြောင့် ပါဝင်လာမဲ့အနုပညာရှင်တွေကို သိချင်နေခဲ့ရတာပါ။ You Are My Glory နဲ့ The Long Ballad ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထွက်လာတဲ့အခါ ကြည့်ရှုအားပေးဖို့စောင့်နေတုန်းမှာပဲ Dilraba က Ren Jialun နဲ့အတူ နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းသစ်ကို လက်ခံရိုက်ကူးနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
The Blue Whisper ဆိုတဲ့ ဒဏ္ဍာရီလာဇာတ်လမ်းကတော့ Jiu Lu Fei Xiang ရဲ့ The Blue Whisper ဝတ္ထုကိုအခြေခံကာ ဇာတ်အိမ်တည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့… မင်းသမီး Shunde ဟာ ငါးမန်းမိစ္ဆာ Chang Yi (Ren Jialun) ကို ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့အချစ်တော်တိရိစ္ဆာန်လေးအဖြစ် မွေးမြူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ငါးမန်းကို လူယဥ်လာစေဖို့အတွက် မိစ္ဆာလေ့ကျင့်ပေးသူ သခင်မ Ji Yunhe (Dilraba Dilmurat) ကို ရှာဖွေခဲ့ပြီး ၃လအတွင်းမှာ အပြီးသတ်ရမဲ့ တာဝန် ၃ခုကိုပေးခဲ့ပါတော့တယ်။ ထိုတာဝန် ၃ခုကတော့..ငါးမန်းမိစ္ဆာဟာ လူတွေနဲ့ စကားပြောနိုင်ဖို့၊ ခြေထောက်တွေရှိလာဖို့နဲ့ သစ္စာရှိစွာအမှုကိစ္စတွေကို ထမ်းဆောင်ပေးဖို့ ဆိုပြီး စွမ်းဆောင်ခိုင်းပါတော့တယ်။
တစ်ဖက်မှာတော့ အရည်အချင်းရှိပြီး စွမ်းရည်မြင့်တဲ့ ဆရာသခင်မ Yunhe ဟာ အတင်းဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ ငါးမန်းမိစ္ဆာကို ဂရုဏာသက်ဝင်မိပြီး အထိန်းချုပ်ခံဘဝကနေ လွတ်မြောက်အောင် ကူညီပေးချင်နေပါတော့တယ်။
ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကြားမှာ Yunhe က သူမရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီး ငါးမန်းမိစ္ဆာကို ကူညီသွားမှာလား? သူမရဲ့ခံစားချက်တွေက ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲလာမလဲ? မတူကွဲပြားမှုတွေကြားမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ဘယ်လိုမျိုးပေါက်ဖွားလာမလဲ? ဆိုတာကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းဝတ္ထုရဲ့ပရိသတ်အများအပြားကတော့ Live Action ကြည့်ဖို့အတွက် လွန်စွာစိတ်အားထက်သန်နေကြပြီး အဓိကခေါင်းဆောင်မင်းသားနဲ့မင်းသမီး Diliraba နဲ့ Jialun တို့အတွဲကိုလည်း လွန်စွာသဘောကျနေကြပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်စလုံးက ရှေးဟောင်းဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ချီးမွမ်းအားပေးမှုတွေရရှိထားတဲ့အပြင် ဇာတ်လမ်းကိုဖန်တီးရိုက်ကူးမဲ့သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဒါရိုက်တာ Chu Yuibun က နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတွဲတွေဖြစ်တဲ့ Noble Aspirations, Ashes of Love, and The Long Ballad တို့ကိုရိုက်ကူးထားပြီး အဝတ်အစားပိုင်းကိုတော့ Joy of Life, The Untamed ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရဲ့ Stylist Chen Tongxun က တာဝန်ယူထားတာပါ။ ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြောက်မြားစွာနဲ့ ကြီးကြီးမားမားရိုက်ကူးထားတဲ့ The Blue Whisper ဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Next မိမိုက်နေတဲ့အချေပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှေ့ဆက်မဲ့နေ့ရက်တွေအတွက် Wang Yibo ရဲ့ မျှော်လင့်ထားချက်ကတော့... »
Previous « “Word of Honor” ထဲက မင်းသားနှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြန်အလှန် ထင်မြင်ချက်